“Travail à domicile”,asa efa maro mpanao
Efa mahazo vahana be eto amintsika ny asa ao an-trano na «travail à domicile ».Asa izay natao entina anampiana ireo izay tsy afaka mamonjy trano fiasana.Sehatr’asa maro no efa afaka atao “à domicile” amin’izao fotoana izao
“Wedding planner” : asa tena mahavelona raha voafehy tsara
Mbola vitsy ireo mpanam-bady manatona “wedding planner” eto amintsika raha oharina amin’ny any ivelany na efa mihamitombo isa aza.
Inona ny fanomezana azonao tamin’ny fetin’ny ray farany teo ?
Ny alahady lasa teo no nankalazana ny fetin’ny ray. Mahaliana ny vehivavy tokoa ny hahafantatra ny karazana fanomezana tian’ny lehilahy ho azo mantsy. Mamaly izy ireo :
Mpisolo vava : Mila mahitsy sy manaraka ny lalàna
Misolo vava olona iray manoloana ny ambaratongam-pahefana rehetra ny mpisolo vavaarana.
Nanambady i Aina Cook
Tao anatin'ilay fifaninanan-kira Pazzapa no nahafantarana voalohany an'i Aina Cook. Vao 14 taona izy tamin'izany fa niavaka noho ilay feony sy ny habeny ihany koa.
Mpiasa sosialy : mbola afangarontsika amin’ny mpanao asa soa mazana
Asa afangaron’ny maro amin’ny asa soa ny asa sosialy. Manampy ireo manana olana eo anivon’ny fiaraha-monina sy manabe ny mponina mba hitondra fivoarana no tena asan’ny mpiasa sosialy/ Misy ny atao hoe « assistant social » ary misy ko ireo antsoina hoe « animateur de developpement social ». Ireo olona ireo izay samy atao hoe mpiasa sosialy avokoa.
Efa manomboka mahavantana ny Malagasy anefa ny manatona azy ireny na dia tsy tena mbola tafiditra anatin’ny kolontsaina toy ny an’ireo vahiny aza izany. Mifototra amin’ny fahaizana mihaino ny asan’ny “psychologues. Eo ihany koa ny fitiavana manampy ny hafa.
Nianatra momba ny saina
Olona nianatra manokana momba ny saina sy ny fihetsiky ny olombelona amin’ny ankapobeny (comportement) ny « psychologues ». Mazana dia ny « accompagnement psychologique » sy ny « psychothérapie » no tena sahanan’izy ireny. Na izany aza anefa, hita eo amin’ny sehatra rehetra, izay misy eo anivon’ny fiaraha-monina ny « psychologues ». Manampy ireo olona misedra olana hiatrika izany sy hiaina ara-dalàna eo anivon’ny fiaraha-monina ihany koa izy ireo.
Mianatra mandritra ny 5 taona farafahakeliny
Dimy taona eo ho eo no faharetan’ny fianarana raha te-hiditra eo amin’ity asa ity. Manana diplaoma “Master 2” amin’ny lalam-piofanana psykôlôjia mantsy izay vao afaka manao izany. Raha ny eto amintsika manokana dia mila miditra anatin’ny “Ordre National des Psychologues de Madagascar” ireo “psychologues” rehetra nahavita fianarana mba hahazoana ny karatra hahafahana miasa. Hatreto dia mbola ny sekoly ambony katolika UCM ihany no ahitana ny lalam-piofanana psykôlôjia eto Madagasikara. Tsy vitsy amin’ireo “psychologues” malagasy kosa anefa no nivoaka tamin’ireo sekoly ambony lehibe tany ivelany.
Mahay mihaino ny hafa sy mametra ny fihetseham-po
Ny fahaizana mihaino ny hafa, io no toetra voalohany tokony hananan’ny “psychologues”. Io mantsy no tena ifotoran’ny asany. Ankoatra izay dia tokony hahay hametra ny fihetseham-pony manoloany ny fiainany manokana sy ny asany ihany koa ny “psychologues”.
Ny olana sedraina
Olana mbola sedrain’ireo “psychologues” eto amintsika ny fisian’ireo izay mitonon-tena ho mpisehatra eo amin’ity asa ity kanefa sady tsy nandia fianarana momba izany. Manimba ny asan’ireo tena “psychologues” izy ireny ary manimba ny fiainan’ireo voafitany ihany koa.
Isaorana ny Psychologue clinicienne Holitiana Rajaonarivony Rabarison nanome ny fanazavana mikasika ny loha-hevitra